30 sano ee mashruuca GNU | Laga soo bilaabo Linux
30 sano ee mashruuca GNU
Waxay yihiin Link | | GNU / Linux, Noticias, Kuwa kale
Maanta oo kale maanta oo kale 30 sano ka hor Richard Stallman bilow mashruuca GNU, oo sidaas darteed, wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqii Software Free oo aniga ayaa abuura 4 xorriyadood.
Talaabadani waxaa loo abuuray si loo abuuro nidaam hawlgal oo bilaash ah oo la jaan qaada UNIX (dhab ahaantii GNU macnaheedu waa GNU maaha Unix) abuurista qalab kala duwan sida isku duubiyaha GCC, tifaftiraha EMACS (waxaa abuuray Stallman laftiisu intii lagu guda jiray sannadihii uu ka shaqeynayay MIT), iwm, laakiin seegay qayb muhiim ah, the Kernel, oo imaan lahaa 1991 iyadoo la adeegsanayo magaca Linux, waxaa bilaabay Linus Torvalds (Horeba waad ogtahay sababta OS loogu yeero GNU / Linux oo kaliya ma ahan Linux, inkasta oo qof kastaa u wici karo wuxuu doono).
Sannadahaas Richard Stallaman wuxuu u halgamay xorriyadda Software-ka, wuxuu aasaasay Aasaaska Software Free, liisanka GPL, wuxuu taageeraa shatiga Creative Commons, IWM
Kuma yaa ka fiican Stallman laftiisa inuu sharraxo waxa Software-ka Bilaashka ahi yahay:
30 sano, oo ha u ahaato 30 kale more
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » 30 sano ee mashruuca GNU
52 faallooyin, ka tag taada
Waxay yihiin Link dixit:
"Horay waad u ogtahay sababta OS loogu yeerayo GNU / Linux oo aan loogu yeerin Linux oo keliya, in kasta oo qof walba uu u wici karo wuxuu doono"
"Hydorah: Ciyaarta Indie ee loogu talagalay Linux"
Noolow Stallman iyo GNU. 🙂
Jawaab Tina Toledo
Ahahaha taabo xD
Noolow San Ignucio ha noolaado!
Dhab ahaan, farxad soddon sano ee mashruuca GNU. Hadduusan isaga ahayn, ma haysan lahayn kernel Linux ah oo qof walba heli karo, oo waxaan la dagi lahayn kernel-ka Hurd.
Waxaan u maleynayaa inay tahay tan kale.
Kernel wuu lahaan lahaa, oo laga yaabee inuu haysto liisan aan beeshu guud ahaan ka noqon doonin Taalibaan (ma ahan dhammaan).
Iyo ... waa habka kale ee ku xeeran waxaad tiri ... hagaag.
Sixitaan: Ma haysan lahayn Hurd iyo Linux toona. Oo waxaan la dagi lahayn FreeBSD
OpenBSD ayaa goor dambe timid
Nabadeena iyo badbaadiyeheena Stallman
Tani waxba uma aha, laakiin waxaan ku dhaaranayaa in kani yahay nooca VALVE, ama in Stallman wax badan iska beddelay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan dhajiyo sawirkan:
Tani waxba uma aha, laakiin waan ku dhaaran karaa inaadan fahmin kaftankayga. Ninka VALVE wuxuu u egyahay sida Stallman.
Taasi waa inay tahay reincarnation of San Ignucio.
Micnaheedu maaha gnu / Linux, taasi waxay noqon kartaa markay barnaamijyadu yaraayeen iyo haddii ama haddii ay ahayd inaad u baahatid kuwa uu horumariyo gnu. Maanta waxa kaliya ee loo isticmaalo waxa laga sameeyo gnu waa bash, iyo gnome gimp (in kasta oo gnome horeba ay u sameysay gnome foundation markaa magacaas maahan marka laga reebo) iyo gcc / gdb / glibc si loo soo ururiyo xirmooyinka iyo shatiyada.
Mustaqbalka waxa kaliya ee ka haridoona gnu wuxuu noqon doonaa rukhsadaha, (hadii shatiyada kafiican aysan soo bixin, waa hubaal inay soo baxaan 🙂) Sababtoo ah bash waxaa lagu badalay mid ka wanaagsan, sidoo kale gcc / gdb / glibc.
Ku jawaab Felipe
Doodan waa been, waa ku filan tahay in yar laga ogaado injineernimada softiweerka iyo sida noocyada mashaariicdu u shaqeeyaan.
Laga soo bilaabo daaqadaha 95 (oo aanan dib ugu laabaneynin sidaa darteed ma xasuusto kormeerayaasha monochrome) illaa daaqadaha 8 hubaal ma jiraan wax raad ah oo isku mid ah, koodhka cusub waxaa u badan inaysan qorin isla dad isku mid ah, taasina maahan maxay u joojineysaa daaqadaha.
Yaan si qaldan loo sheegin.
Ku jawaab shaqaalaha
Waa barnaamij ganacsi, isbarbardhiggaaga lama barbardhigi karo. Ma joojin doono inay ahaato daaqadaha, in kasta oo ay isticmaali doonaan dhammaan qalabka gnu iyo microsoft midna.
"Waa software ganacsi"
IYO? Nidaamyada GNU / Linux sidoo kale waxay noqon karaan kuwo ganacsi, ka sokow, muxuu ujeeddada barnaamijku u leeyahay inuu ku sameeyo marka waxa laga hadlayo ay yihiin injineernimada software-ka iyo noocyadeeda? Aynu isku qasin isteroberi tufaax ah.
Isbarbardhigaagu ma aha mid la barbardhigi karo.
Way fiicnaan laheyd in la taageero sheegashooyinkaas.
"Ma joojinaynin daaqadaha, in kasta oo ay isticmaali doonaan dhammaan qalabka gnu iyo microsoft midna."
In kasta oo tusaalahaasi sidoo kale been yahay, way i caawinaysaa haddii aad dhigto, maxaa yeelay waa uun waxa aan sheegayo, macno malahan haddii lambarradu aysan ahayn kuwii asalka ahaa, ma joojinayso inay isku mashruuc noqdaan.
Faahfaahinta ayaa ah in aan loo arkin inay la mid tahay GNU sida ay u tahay Windows, tani su'aal kama taagna shatiyada, iyadoo la leeyahay waa been, oo lagu sameeyo bey'ad guud oo si qaldan loo sheego.
Meeshii aan dhigo liisamada, waxay ahayd inaan adeegsado "ujeedada softiweerka."
Sababtoo ah GNU maahan magac ay shirkad bixisay, wuxuu ahaa magac la bixiyay tan iyo xilligaas nidaamku wuxuu ku tiirsanaa xilligaas.
Waqtiga aad joojiso iyada oo ku tiirsan, waxay noqoneysaa mid gebi ahaanba khusaysa in la magacaabo, marka laga reebo nostalgic. Taas oo jidka ag fadhida, mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee diimeed, looma magacaabin gnu / Linux, laakiin waxaa loo bixiyay gnu / x11 / Linux.
Dhinaca kale, daaqadaha waa magac guud oo Microsoft ay u adeegsatay in ay ku sifeeyaan wax soo saarkiisa lahaansho, wax shaqo ahna kuma lahan aaladaha ama diirka ay isticmaaleyso, sidaas darteed magaceeda sabab uma lahan in la beddelo
Waa sida hadda Coca-Cola, wax dambe kama haysato Coca ama Cola, waa isku darka kiimikooyin leh sonkor, biyo iyo kafeyn taasoo ka dhalata badeecadaas: COCA-COLA.
Dhinaca kale, waxaa jiri doona kuwo kale oo lagu sii magacaabi karo REFRESCO DE COLA, maadaama ay wali u isticmaalayaan lowska soosaarka cabitaanka.
Sababtoo ah GNU maaha magac ay shirkaddu bixiso, "
Maxay ku xiran tahay xaqiiqda ah inaysan shirkad ahayn? Waxaa laga yaabaa in magac loo bixiyo nidaamka hawlgalka.
Waxay ahayd magac la bixiyay sababtoo ah waqtigaas nidaamku wuxuu ku tiirsanaa taas, muddada. "
Been, magaca lama bixin sababtoo ah waxay ku tiirsanayd, runti magaca ayaa jiray kahor nidaamka qalliinka.
"Mashruuca GNU waxaa la bilaabay 1984 si loo horumariyo nidaamka GNU" oo ka yimid GNU.org
Waqtiga aad joojiso iyada oo ku tiirsan, waxay noqoneysaa mid gebi ahaanba khusaysa in la magacaabo, marka laga reebo nostalgic.
Been, waxaan horey u sharaxay sida marka software-ka loo badalayo uu wali isku mid yahay, inkastoo xaqiiqda ah in qeybihii hore ay ka mid yihiin kuwa cusub.
"Taas oo jidka ag fadhida, mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee diimeed, looma magacaabin gnu / Linux, laakiin waxaa loo yaqaan gnu / x11 / Linux."
Mar labaad been ah, bogga GNU FAQ ayaa sifiican u sharxaya tan.
"Taa baddalkeeda daaqadaha waa magac guud oo microsoft u isticmaalay inuu ku sharaxo wax soo saarkiisa lahaanshaha."
Been, Windows maahan magac guud, fadlan, nooc kasta oo ka mid ah noocyadeeda waxay ku egtahay xuquuqda daabacaadda oo waxaa si dhammaystiran loogu qeexay waxay awood u leedahay iyo waxa aan loo isticmaali karin.
"Wax shaqo ahna kuma lahan aaladda ama xabagta ay isticmaasho, sidaas darteed magaceeda ma leh sabab loo beddelo."
Isla sidaas ayaa ku dhacda nidaamka GNU, magaciisu shaqo kuma laha aaladaha uu adeegsado, waxaa loogu yeeraa GNU maxaa yeelay waxaa abuuray mashruuca GNU (ka hor intii aysan jirin qalab hadda ka kooban), si la mid ah in Linux sidaas loogu magac daray maxaa yeelay waxay umuuqataa magaca qofkasta oo sameeyay.
Aad baad ii xasuusineysaa faaliyaha FayerWayer ee lagu magacaabo @Win.
Ereyga "windows" waa uun magac ganacsi, maahan wax sax ah oo farsamo leh sida GNU / Linux. Windows-ka xilligan gudaha waa NT ee desktop-ka iyo RT ee mobilada laakiin kahor intaysan noqon CE, Win32, DOS iwm. Waxay kuxirantahay shuruudaha aan raacno si loogu magac daro: Ganacsiga ama farsamada? Ugu dambeyntiina waxaan ku dhamaan doonnaa sidii Linus, "Waxaan ugu yeeraa sidii nin koofiyad ah." Shaki baa iiga jira haddii wicitaanka distro ee 'DRM GNU' ay noqonayso iska horimaad (bilaash - bilaash ah).
Waxaan u maleynayaa in halkan aan horey uga leexanayno mowduuca.
Haatana waxaa jira xitaa canab canab ah oo ay ku yaalleen oo keliya isteroberi iyo tufaax ku dhex jira
Waan caddayn doonaa khaladaadka ku jira faalladaada, laakiin fadlan ku laabo mawduuca.
Windows waa magaca mashruuca, magaca ganacsi wuxuu ahaan lahaa tusaale ahaan, Windows Millenium, Windows Vista, Windows XP.
(Adduunyada GNU / Linux waxay noqon laheyd: Ubuntu, RedHat *, iwm.)
Axdiga Cusubi wuxuu u taagan yahay noocyo. Win XP waa nooca NT 5.1, Vista waa NT 6, Win 7 waa NT 6.1 ...
Windows Mobile iyo Windows Phone iyo noocyadooda CE waa mashruucyo kala duwan, ma arko sababta aan halkan ugu xusnay.
LABA, halkan haddii aad taabatay wax iga caawinaya inaan sii taageero dooddayda.
DOS wuxuu ahaa nidaam hawlgal kahor Windows, markii mashruuca Windows uu dhashay, wuxuu ku saleysnaa DOS, ka dibna wuxuu noqday aalad, sidaas darteed, qaadashada software ka hor dhalashadiisa iyo ka dibba, Windows ayaa loo soo saaray nooc ka dib markii la soo saaray, iyadoo aan la joojin inuu noqdo mashruuca Windows-ka. .
* Red Hat (magaca ganacsiga) waa nidaam GNU / GNIN ganacsi (xitaa shirkad ganacsi oo dadweyne ah!) Ma arko sababta DRM ay daruuri ugu tahay ganacsi.
Ma doonayo inaan noqdo mid qalafsan, laakiin isteroberi iyo tufaax? NT, Win9x / Win32 / DOS, CE waa naqshadaha Windows kernel iyo noocyada (astaan ​​ganacsi oo keliya). 98, XP, 7, 8, Me waa noocyo ganacsi oo kaliya oo loogu talagalay dadweynaha. Waagii hore, barnaamijyada dhammaan 3da ayaa lakala soocay, mid ka mid ah sababaha badan ee ka dhashay .NET. Tusaale ahaan, barnaamijyada aadka u gaboobay sida Norton Ghost kuma socon karayn NT4.0, 2k, XP, laakiin 9x (dhismaha NT malaha command.com oo koontaroolaya qalabka, laakiin waa astaan ​​nidaam adeegsata HAL). DOS waxaa loo adeegsaday sidii nidaamka aasaasiga ah ee 3.11 waxayna si qarsoodi ah u badbaaday illaa Me.
RedHat waxaa ka mid ah rukhsad siinta (halkii, awoodda taageerada) cinwaanka aan ahayn DRM mac, ayaa sii deynaya koodhka ilaha iyo wax ka beddelkiisa. Waxay si buuxda ugu hoggaansan tahay fikradaha GNU. Nidaamyada 'DRM' waxaan ula jeedaa Android (way iska cadahay inuusan ahayn GNU), iyo gaar ahaan SteamOS (Valve wuxuu si furan u taageeraa DRM) doubt Aad baan uga shakisanahay inay haystaan ​​xorriyadda miiska dhaqameed ee GNU / Linux. Sida iska cad SteamOS waa inuu adeegsadaa xoogaa qalab GNU ah, laakiin wuxuu noqon doonaa mid guntin ku jira.
Hagaag, haddii ay tahay mowduuc halis ah, waxaan rajeynayaa inaysan wicitaankeena u yeerin.
«NT, Win9x / Win32 / DOS, CE waa naqshadaha Windows kernel iyo noocyada (astaan ​​ganacsi oo keliya). »
NT iyo win9x waa qoysaska wax soo saarka, win32 iyo win16 waa APIs, DOS wuxuu ahaa OS ka dibna aalad OS ah, CE (Windows CE) waa OS kale oo aan ka hadleynin.
Waxaad ka raadin kartaa wikipedia mid kasta oo ka mid ah ereyada si aad u xaqiijiso.
In ay kaliya tahay astaan ​​ganacsi waxay u baahan tahay mudaharaad.
Anigu waxaan ku jiraa wikipedia tan:
"Microsoft Windows waa taxane ah nidaamyo qaabeysan oo qaabeysan oo garaafyo ah oo ay soo saartay, suuq gaysay, ayna iibisay Microsoft."
«98, XP, 7, 8, Me waa noocyo ganacsi oo keliya oo loogu talagalay dadweynaha. »
Waxaan u maleynayaa inaan halkaan ku helay dhibaatada, waxaad u isticmaaleysaa ereyga "nooc" macno kale. (oo sidaas darteed, isku darka isteroberi iyo tufaax).
Nooca injineernimada softiweeriga ah (oo ah aagga ay dooddan ka galeyso) waa, lambar ama lambar aan u isticmaalno inaan ku ilaalino horumarka mashruuca.
Eg Gimp VERSION 2.8.
Sidaa darteed, mashruuca daaqadaha wuxuu ku leeyahay qoyskiisa NT, nooca 6.2.9200 alaabada ay u qeybiso magaca ganacsiga ee Windows 8 iyo Windows Server 2012.
Wixii macluumaad dheeri ah, ka raadi "noocyada softiweerka ah" si aad u kala soocdo qoyska, noocyada iyo magaca ganacsiga.
Taariikhda inteeda kale ee ku saabsan daaqadaha, norton, android (go off topic) iyo sidoo kale wararka ka imanaya Valve, oo aan wax shaqo ah ku lahayn, waxaan doorbidayaa inaanan faallo ka bixin.
Waxaan dhigay jeexjeexyo (/) oo ma ahan jahawareer (,) inay noqdaan sax (architecture / api / kernel) 9x isku mid maaha oo waxay kuxirantahay amar iyo api, si la mid ah kernel-ka Linux oo leh gnu (adigu waad rabtaa. Aynu ugu yeerno taas, sax?) Ce sidoo kale waa naqshad dhisme kale oo moobiil ah oo markii dambe ku saleysnaa. Steam wuxuu isticmaalaa drm iyo gnu, redhat wuxuu isticmaalaa gnu, ma drm mana arko wax qalad ah oo ku jira (inkasta oo aanan u keenin wadahadal) sababta aysan ula xiriiri doonin gnu?
Sidaan ku idhi faallayda koowaad drm iyo gnu waa iska hor imaad (a so that maamusha waxa la samaynayo iyo inay ugu magac dareen gnu?) Kama aadan jawaabin wax ka hor imanaya. Sida aad ku arki doonto kiiskan dhib malahan in la dhigo gnu. Oh iyo kan soo sheegay daaqadaha isku dayaya inuu helo waxyaalo la mid ah gnu + Linux (pear leh tufaax) ma ahayn aniga, halkii ayaan ka soo horjeeday. Salaan.
ps: Waxaan ku magacaabi lahaa kde in haddii ay tahay mashruuc dhab ah oo dib loo qoro dhowr jeer oo aan astaan ​​ganacsi u lahayn barnaamijyo dhowr madal oo aan xiriir la lahayn.
Laakiin gnulinux maahan magaca loo qoondeeyay inuu noqdo magaca guud ee dhammaan nidaamyada hawlgalka isticmaala kernel-ka (kaliya stallman ayaa ah kan kaliya ee adeegsada). Si kastaba ha noqotee Windows SI waa magac ganacsi oo loo adeegsado tixraaca qoyska nidaamyada hawlgalka ee ay abuurtay Microsoft, waxaan haysanaa Windows XP, Windows Vista, Windows 7, iwm. Xusuusnow in qaybta ugu dambeysa ee magaca nidaamka qalliinka ay sidoo kale ku kala duwan tahay si ay u muujiso inaysan dhammaantood isku mid ahayn. Ma aqaano wax Linux Linux ah oo loo yaqaan gnulinux, kani waa Ubuntu, archlinux, fedora, debian, iwm. Laakiin magacaas guud ee adeegsiga qaarkood meelna laguma dhisin, waa uun caado. Iyo dhaqan hore ... sidii aan idhi waxaan dib u xaqiijinayaa faallooyinkayga
"Laakiin gnulinux maahan magaca loo qoondeeyay inuu noqdo magaca guud ee dhammaan nidaamyada hawlgalka isticmaala kernel-ka Linux"
Xaaladda aad tirineyso android, iyo nidaamyada kale ee adeegsada Linux Kernel, waad saxnaan laheyd, laakiin faallooyinka ma ahan kuwo khuseeya.
Haddii ay dhacdo inaad tixraacdo qashin-qubka, waxaad ku dhaceysaa qalad kale, qashin-qubka ma ahan nidaamyo kale oo lagu shaqeeyo, waa wax laga beddelay QAYB-QAADASHADA NIDAAMKA ISKU MID AH.
Marka, GNU / Linux haddii ay tahay magaca la dejiyey, looguma tala galay MAGAC laakiin waa in LA QAADO dhammaan nidaamyada adeegsada nidaamka hawlgalka GNU ee leh Linux kernel.
"(Kaliya stallman waa midka kaliya ee adeegsada)."
Been, uma maleynayo inay tahay inaan tan beeniyo, mise aniga?
Marka laga hadlayo inta kale ee aad dhigatid, waxaan u maleynayaa inay sabab u tahay inaadan aqrin faallooyinkeygii hore (Kaliya farqiga 1 daqiiqo ee udhaxeeya kan iyo kanaga).
Laakiin si kasta oo aan kuu cadeeyo, adiga oo adeegsanaya qaar ka mid ah "magacyada ganacsi" ee aad isticmaashay.
Waxaa jira mashruuc siyaasadeed oo GNU ah, oo la qeexay lana magacaabay ka hor xafiisyada u dhigma (oo ay u badan tahay nuqul)
Waxaa jira mashruuc GNU SOFTWARE ah oo ka dhasha GNU OS (isku mid sida kor ku xusan)
Waxaa jira mashruuc softiweer ah oo la yiraahdo Linux oo natiijadiisu tahay Kernel (oo la mid ah kuwa kor ku xusan laakiin kan ayaa xitaa leh xuquuqda lahaanshaha, marka hubaal haddii jahwareerku uusan ka faa'iideysan iyaga mar hore ayay ka caban lahaayeen is fahan la'aanta)
Dhammaantood waxay ku leeyihiin boggooda wikipedia taas oo caddaynaysa.
Waxaa jira mashruuc Debian ah, oo ah BULSHO, kaas oo ilaaliya nidaamka hawlgalka GNU natiijooyinkiisuna ay yihiin:
Debian GNU / Hurd
INDHO, kuwani waa magacyada rasmiga ah, MA ahan kuwa ganacsiga.
Isku mid ah Arch noocyadiisa Linux iyo HURD.
Waxaa jira doodaheyga iyo wixii kahoreeya asalkeyga, waxaan aad u xiiseynayaa inaan ogaado taada.
Qeexitaanka nidaamka qalliinka maahan wax la aasaasay oo 100% sax ah, maxaa yeelay tusaale ahaan:
1- Kuwa dhahaya in nidaamka qalliinka uu yahay kernel, iyo adeegyada aasaasiga ah
2- Kuwa dhahaya in nidaamka qalliinka uu yahay udub-dhexaadka, yutiilitida, server garaafka iyo deegaanka desktop (aragtidan ay taageerto Microsoft lafteeda)
Marka, ubuntu, archlinux iwm, oo ku saleysan labadaba, waa nidaamyo shaqeynaya, oo isticmaala kernel-ka, qaar ka mid ah korantada gnu, iyo horumarin dhinac saddexaad ah oo ka dhigaysa barnaamijyo loo adeegsan karo aadanaha.
Mashruuca Debian waa urur ay ku midoobeen dad u sameeyay sababo guud inay abuuraan nidaam hawlgal oo bilaash ah (OS). Nidaamkan hawlgalka ee aan abuurnay waxaa loo yaqaan Debian.
diyaar. wax intaa ka badan oo la yiraahdo
ku saabsan debian. haha. Faalladaadu waa mid aan macno lahayn. Runtu waxay tahay jawaabtaadii ugu horeysay ee aad bixisay waxaa loogu jawaabay si naxariis leh. haha Anigu garan maayo sidaad u ansixisay softiweerka ing, ka sokow been-abuurka haha. Allahayow. Taasi waa sababta aanan ula kulmin saynisyahannada kombiyuutarka, badankoodna lama soo bandhigi karo
Waxaad ubaahantahay inaad sii wadato aqrinta.
«Qeyb weyn oo ka mid ah qalabka aasaasiga ah ee dhammaystiraya nidaamka hawlgalka ayaa ka yimid mashruuca GNU; markaa magacyada: GNU / Linux, GNU / kFreeBSD iyo GNU / Hurd. Qalabkani sidoo kale waa bilaash. "
Taasi waxay ku leedahay isla bogga http://www.debian.org/intro/about Taas oo aan u malaynayo inaad ka heshay macluumaadkaaga, mana khilaafayso waxaan leeyahay.
Waa maxay jawharad!
Waan kaa xaday oo waxaan kaga jawaabayaa qoraal aan qorayo.
Emm… tusaale…. TCP / IP ???
Ku jawaab wilson
Hagaag, hambalyo waxaana laga yaabaa in mashruucan weyn ee saynisyahannada kombiyuutarka anshaxa fuliya inbadan oo kale.
Waxaan rajeynayaa inaad sii noolaan doontid oo aad hagaajineyso GNU dhowr sano oo dheeri ah, waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa qof kasta oo adeegsada kana qayb qaata mashruucan.
Ku jawaab Seba
Waxaan kuugu hambalyeynayaa 30 sano
Ku jawaab si aad u madoobaato
hambalyo 30 sano ayaa laga joogaa….
Mahadsanid mr. Stallman oo bilaabay dhaq dhaqaaqa dhamaanteen si aan u gaarno nidaam xor ah oo anshax leh - stallmanic halkaas oo maanta aan ku baran karo barnaamijka iyada oo aan wax xaddidaad ah iyo iyada oo aan la aqbalin shuruudaha kaliya naga tagi doona naxariista rabitaanka dhowr software-da (hal maalin isaga Waxaan ku dhejin doonaa debian hurd ipod (wali waan jaahil ka ahaa afarta xorriyadood markii aan helay). GNU qof walba hyey!
Ku soo jawaab Pobreotaku
Si aad u aragto dadka, waad leexanaysaa, oo waad ku filan tahay mawduuca.
Haddii aad rabto inaad ka hadasho daaqadaha, goobta ama meel kasta, halkan waxaan kaga hadlayaa 30-kii sano ee GNU, markaa, fadlan, diiradda saar mawduuca.
Waxaan ugu hambalyeynayaa bulshada 30 sano oo wax la qaybsanayey. In kasta oo laga soo bilaabo maalintii ugu horeysay ay heshay weeraro, qaar magaca xorriyadda iyo wax is daba marin kale oo afka ah.
Waxaan ugu hambalyeynayaa Richard Stallman inuu nooga digtoonaado oo uusan u suuroobin heesaha seeriga ah, oo uusan u dhiibin iscasilaada ay neoliberalku isku dayayaan inay nagu hogaamiyaan siyaasadooda gaarka loo leeyahay, taas oo ah, siyaasadooda dhaca iyo ku habboonaanta alaabada guud.
Ku jawaab vivaldis
wax walbana waxay ku dhasheen madbacad darteed.
HP LIP XD weli ma jirin
Anigu garan maayo midka, astaanta, richard stallman u sheegay, Isbaanishkiisii ​​ugu xumaa, in markay codsanayaan lambarka darawalnimada daabacaadda ay diideen.Hortii marna kama aysan diidin ikhtiyaarka ah inuu dib u eego koodhkan, illaa 68.
Wuu ka naxay diidmada in dib loo eego koodhka, wuxuu bilaabay dhammaan dhaqdhaqaaqii GNU.Richard Stallman waa xagjir xagjir ah.
Ma jeclaan lahaa inaan ogaado waxa OS aad isticmaasho?
1) Waxay ahayd Xerox
2) Wuxuu adeegsadaa GNewSense.
RMS badiyaa waxay isticmaashaa isdhexgalka TTY, marmarna X11 interface si loogu isticmaalo GIMP GNewSense-keeda.
Ka sokow taasi waxay ku xiran tahay oo keliya internetka dhowr jeer oo ay u dirto oo u hesho emayl em emacs
dhagax iyo duub dijo
Marka laga soo tago xaqiiqda ah inaysan jirin waxyaabo badan oo muhiim u ah GNU qaybinta hadda ee GNU / Linux, Stallman iyo kooxdii taageertay waxay lahaayeen aragti iyo go'aan ah in la dhiso aasaaska Software-ka Bilaashka ah (oo ku sii fidaya meelaha kale sida shatiyada hal-abuurka ah) Commons), taas oo tirooyinkiisu u qalmaan aqoonsi ballaadhan; iyadoon la xukumin, taariikhda xisaabinta aad bay uga duwanaan lahayd.
Waxaan ku hanbalyeynayaa 30-ka sano ee mashruuca GNU iyo qadarin aan u hayo inta suurta galisay.
Ku jawaab rockandroleo
Sidaas oo kale. RMS la'aanteed, fikradda ah barnaamijka bilaashka ah ma jiri doono sida oo kale.
Zapatistas waxay abaabuleen 1984 iyo mashruuca gnu waqti isku mid ah. Waa imisa jir. 30 sano oo halgan iyo iska caabin ah. Waxaan ugu hambalyeynayaa mashruucan oo shaki la’aan ka qayb qaatay rajada adduun wanaagsan, adduun adduunyo badani ku habboon yihiin. Hambalyo.
Ku jawaab rizhu
Malagueños Asal ah oo Bilaash ah dijo
Hambalyo GNU aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Ku jawaab asalka iyo bilaash Malagueños
IP vs Ifconfig: miiska isu dhigma
Ku deji isdhexgalka macmalka ah ArchLinux